फेसन : जे समयानुकल छ
फेसन के हो ? यस सन्दर्भमा एक भारतिय चर्चित फेसन डिजाइनरको जवाफ घतलाग्दो थियो । उनले भनेका थिए, ‘फेसन त्यही हो, जुन तपाईंलाई सहज लाग्छ ।’ आफुलाई हिँड्न, बस्न, काम गर्न सहज हुने पहिरन नै फेसन हो । यस्तो पहिरनले तपाईंको आत्मविश्वास बढाउँछ । अर्थात पहिरनको कारण कुनै किसिमको झन्झट व्यहोर्नुपर्दैन ।
अहिले हामीकहाँ थुप्रै फेसन डिजाइनर छन् । फेसन डिजाइनिङ गर्ने बुटिक पनि जताततै खुलेका छन् । तर, यि सबै बजार निर्देशित शैलीलाई पच्छ्याइरहेका छन् । फेसन के हो भन्ने कुराको सही जवाफ उनीहरुसँग पनि छैन, जो आफुलाई फेसन डिजाइनर भन्न रुचाउँछन् ।
हाम्रा अधिकांश फेसन डिजाइनरको बुझाई के छ भने, झट्ट हेर्दा चिटिक्क देखिने । भिडमा अलग देखिने । सबैको आँखा पर्ने पहिरन नै फेसन हो । साथै विश्व बजारमा जस्तो शैली चलेको छ, त्यही शैलीलाई पच्छ्याउनु नै फेसन हो । तर, यी सबै परिभाषा र बुझाई आफैमा पूर्ण छैनन् । वास्तवमा फेसन के हो ?
जे सहज लाग्छ
खासमा फेसन त्यही हो, जुन पहिरन तपाईंलाई सहज लाग्छ । तपाईं हिँडडुल गर्नुहुन्छ, कार्यलयमा काम गर्नुहुन्छ, व्यापार व्यवसाय गर्नुहुन्छ । यावत् काम गरिरहँदा तपाईर्ंलाई आफ्नो पहिरन एकदमै सहज र अनुकुल महसुष हुनुपर्छ ।
त्यही कारण त फेसन विज्ञहरु भन्छन्, ‘फेसन यस्तो हुनुपर्छ, जो तपाईंलाई सहज हो । यसले तपाईंलाई शारीरिक वा मानसिक रुपमा असहज महसुष नगराओस् ।’
आफ्नो शरीर र काम अनुसार सहज हुने किसिमको पहिरन लगाउनुभयो भने तपाईंले अतिरिक्त झन्झट व्यहोर्नुपर्दैन । आफुले लगाएको पहिरन सहज लाग्छ । यसले गर्दा तपाईंको आत्मविश्वास पनि बढ्छ । वास्तवमा हामीले लगाएको पहिरनले हाम्रो आत्मविश्वास बढाउने काम पनि गर्नुपर्छ । असहज पहिरनमा तपाईं जतिसुकै चमकदमक देखिएपनि त्यसले तपाईंको आत्ममनोवल कमजोर बनाइरहेको हुन्छ ।
जबकी पहिरनले मान्छेको मनोवल पनि बढाउनुपर्छ । त्यसैले बजारमा चलेको वा स्टाइसिल देखिने चक्करमा भद्दा, असहज पहिरन लगाउन हुँदैन ।
फेसन भन्नसाथ हामी बजारमा चलेको ट्रेन्डलाई बुझ्ने गर्छौं । वा अरु मान्छे खासगरी सेलिब्रेटीले अपनाएको पहिरन शैलीलाई बुझ्ने गर्छौं । अरुलाई चिटिक्क र सुहाउँदो देखिएको पहिरन देखेपछि हामी लोभिन्छौं । अतः हामीपनि सोही किसिमको पहिरन शैली अपनाउने प्रयास गर्छौं । तर, एउटा व्यक्तिलाई जुन पहिरन सुहाउँछ, तपाईंलाई त्यो सुहाउँदो नहुन सक्छ । एउटा व्यक्तिको सौन्दर्य जुन किसिमको रंगले खुल्छ, तपाईंको सौन्दर्य त्यही रंगले नखुल्न सक्छ ।
तपाईंको शारीरिक बनौट, वर्ण, रुपरंगले नै यसमा निर्भर गर्छ कि, तपाईंले कस्तो पहिरन शैली अपनाउनुपर्छ ?
अरुको देखेर होइन, आफैलाई हेरेर पहिरन शैली अपनाउनुपर्छ । आफ्नो शारीरिक वनौट, वर्ण, उचाई, रुपरंग अनुसार सही किसिमको पहिरन छनौट गर्न सक्नुपर्छ ।
कुनै हिरो वा हिरोइनले जुन पहिरन लगाउँदा आकर्षक देखिएका छन्, त्यसले तपाईंको सौन्दर्य नखुल्न पनि सक्छ । किनभने उनीहरुको शारीरिक ढाँचा र तपाईंको शारीरिक ढाँचा फरक छ । आफ्नो शारीरिक ढाँचा अनुरुपको पहिरन नै आफुलाई सुहाउँदो हुन्छ ।
जे समयानुकल छ
फेसन भनेको समयानुकल हुनुपर्छ । जाडोको मौसममा तपाईंले त्यस्तो पहिरन शैली अपनाउनुपर्छ, जसले शरीरलाई न्यानो प्रदान गर्छ । स्टाइलिस एवं ग्ल्यामरस देखिने चक्करमा छोटो, पारदर्शी, खुला पहिरन लगाउनु हुँदैन ।
ठिक यसैगरी गर्मीमा तपाईंले यस्तो पहिरन लगाउनुपर्छ, जसले सितलता प्रदान गर्छ । खुला र सहज पहिरन लगाउनुपर्छ । पसिना सोस्न सक्ने पहिरन हुनुपर्छ ।
वर्षायाममा लगाइने परिहन जाडो वा गर्मीको पहिरन भन्दा भिन्न हुनुपर्छ । यतिबेला लगाइने पहिरन हल्का हुनका साथै पानीले भिजेर पनि खास असर नगर्ने किसिमको हुनुपर्छ । वा पानीले भिजेपनि चाडै सुक्ने किसिमको हुनुपर्छ । यसरी मौसम अनुकुल पहिरनको छनौट गर्नु नै फेसनेवल हुनु हो ।